I-AppSheet: Yakha kwaye uhambise iNkqubo yokuVunywa kweMfono ngePhepha leGoogle | Martech Zone
Ngelixa ndiqhubeka nokukhula amaxesha ngamaxesha, andinazo zombini italente okanye ixesha lokuba ngumqambi wexesha elizeleyo. Ndiyaluxabisa ulwazi endinalo-luyandinceda ukuvala umsantsa phakathi kwezixhobo zophuhliso kunye namashishini anengxaki mihla le. Kodwa… andijonge kuqhubeka nokufunda.
Kukho izizathu ezibini zokuba ukuqhubela phambili kobuchwephesha benkqubo ayisosicwangciso-qhinga:
Okwangoku kwikhondo lobomi bam - ubuchule bam buyafuneka kwenye indawo.
Isizathu esikhudlwana, nangona kunjalo, kungenxa yokuba andikholelwa kwelokuba ibango labangaphumeleliyo labaphuhlisi liza kuhlala likho.
Ngoba? Kungenxa yokuba amaqonga aphambili athumela izisombululo ezintle ezingenakhowudi.
Akukho Khowudi, engenakhowudi, kunye nezisombululo ezisezantsi zekhowudi
Isigaba esilandelayo setekhnoloji yedijithali sinokuba semnandi ngakumbi kunayo nayiphi na inkqubela phambili esiyibonileyo ethubeni. Imibutho emikhulu iphuhlisa ukurhuqa kunye nokulahla (akukho khowudi okanye ikhowudi) izisombululo ezilungileyo ngobuhlanya. Ithuba lale nkqubo alinamda njengoko iinkokheli zeshishini zingayi kufuna ukuba iqumrhu lophuhliso lizise isisombululo sabo kwisketch sketch ukuya kwisicelo esipheleleyo.
Ukuba usebenzisa Indawo yokusebenzela kaGoogle Yombutho wakho (ndingayincoma kakhulu), baqalise i-AppSheet-ayakhi-khowudi yokwenza isicelo! Kunye Indlela yokusebenza, Unokwenza ngokukhawuleza ii -apps zesiko ukunceda ukulungelelanisa, ukuzenzekelayo, kunye nokwenza lula umsebenzi. Akukho khowudi iyimfuneko.
Nabani na kwindawo yakho yokusebenzela kaGoogle angenza kwaye aphathe ii -apps zakhe… ezinokuthi zonyuse imveliso yeqela lakho, zinciphise iimpazamo, kwaye zinciphise umva weqela lakho lophuhliso.
Isicelo sokuVunywa kwesiQinisekiso seAppSheet
Nanku umzekelo omkhulu, a Isicelo sokuvunywa kwabaphathi edibanisa iiSpredishithi zikaGoogle kunye neAppSheet ukutyhala ngokulula umxholo ngenkqubo yenyathelo ngenyathelo yokuvunywa.
Lolu hlelo lokusebenza oluthile luxhunyiwe kwi-Google AmaSpredishithi, kodwa unokudibanisa nayiphi na imithombo yedatha onokuyithanda.
Sebenzisa kwi iTunes okanye kuGoogle Play
Elona candelo lililo? Uhlelo lokusebenza olichithe nje ixesha lokudala ngaphandle komgca wekhowudi ayisiyiyo nje Usetyenziso lwewebhu Esebenza kwisikhangeli, iAppSheet ivumela abasebenzisi ukuba benze uhlobo olumhlophe lweapp onokuyisebenzisa kuGoogle Play okanye kwi-iPhone ngeTunes.
Ukuthunyelwa kufuna ubuncinci lwelayisensi yeAppSheet esekwe kwintlawulo yomsebenzisi ngamnye okanye ukuzibandakanya kwePR.
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa eyam Uphando ikhowudi yokuhambelana apha.
tags: iapile iosifayileengenakhowudiusetyenziso lokuvunywa komxholousetyenziso lukaGoogleiphepha lokusebenza likaGoogleIshishini kugooglegoogleIndawo yokusebenzela kuGooglegsuitiOSusetyenziso lwe-iosItunesusetyenziso lweselulaakukho khowudiakukho khowudi insiza yokwakha
Ubudlelwane phakathi koMntu, iiNdawo zabaThengi, kunye neeFunnel zokuThengisa